Kalfadhigii 24aad ee Baarlamaanka Puntland Oo Maanta Furmey (Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Kalfadhigii 24aad ee Baarlamaanka Puntland Oo Maanta Furmey (Sawiro)
Kalfadhigii 24aad ee Baarlamaanka Puntland ayaa Madaxwaynaha Puntland Dr.Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud maanta uu si rasmi ah u furay,waxaana soo xaadiray kulankii lagu furaayya Baarlamaanka fadhigooda 49 Xubnood.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane C/rashiid Maxamed Xirsi ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka isagoo ka warbixiyay ajandaha fadhigaan Baarlamaanka uga hadli doonaan xisaab xirka Dowladda ee sanadkii 2009kii.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay uga hadli doonaan dhamaystirka golaha garsoorka,soogudbinta xeerka gudiga doorashada,ansixinta Wasiirada Cusub iyo masuuliyiinta kale ee u baahan xasaanada, soogudbinta xeerka xuquuqda aadanaha, soogudbinta xeerka aftida dastuurka , qodobadaas waa qodobada hada ajandaha ku jira iyo inta ay soo gudbiyaan Madaxwaynaha iyo kuxigeenka iyo xubnaha Baarlamaanka.
Maqal khudbadii furitaanka guddoomiyaha Baarlamaanka [powerpress]
Mudane Cabdirashid ayaa sidoo kale ka hadlay xaaldaha ka jira dalka kuwasoo uu sheegay in ay dhacaan falaal dil ah oo loo gaysato masuuliyiinta dowladda kuwasoo ay gaystaan dad u dhashay Puntland balse u adeegay dad kale loona baahan yahay in loo istaago sidii wax looga qaban lahaa dadka.
Waxaa sidoo kale ka hadlay Suldaan kamida isimada kajira puntland kazoo sheegay in waxa badan loo bahan yahay in laga wada shaqeeyo amaanka.
Madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah ufaray kulankaas ayaa baarlaamka uga warbixiyay safaradiisa uu dalka dibadiisa ku aaday iyo wax yaabihii uga soo hirgalay isagoo sheegay in wax badan ay kala soo hadleen wax ka qabshad dhinacyo badan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinkii ka dhacay degmada Buuhoodle tasoo uu sheegay in ay si wayn uga xun yihiin dadkii ku dhinteen ayna uga tacsiyaynayaan.
Dr.Faroole ayaa intaa ku daray in dhawaan wafdi kasocda Puntland oo uu horkacaayo Madaxwayne kuxigeenka ay tegi doonaan dalka Itoobiya kuwasoo kala soo hadli doona waxii ka dhacay deegaanka buuhoodle iyo hantidii ay dawlada itoobiya halkaa kala tagtay.
Madaxweynaha ayaa Baarlamaanka hortiisa ka sheegay in dawlada Puntland aysan marnaba aqbalyan jabha tasoo uu sheegay in aysan puntland aqoonsanayan Jabhada SSC waxaan uu intaa ku daray dad shaqsiyaad ah oo goobtaa ka carabaabay in ay ariintaa wadaan puntland aysan aqbalay jabhadan ay tahay waxa xun isgoo misaal usoo qaatay dadkii asaasay jabhadii hore ee soomaliya soomaray in qayabtood ay ka shalaayee tasoo uu tusaale usoo qaatay C/laahi Yuusuf oo uu sheegay inuu ka shalaaya jabhadii SSDF
Munaasabaadn Lagu Furaaya kala Fadhiga 24 ee Baarlaamka Puntland ayaa waxaa kazoo qayab galay Madaxwayna Puntlanda Ku xigeen kiisa iyo Golaha Wasiirda Puntland iyo ismo